အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ မြန်မာ-ဗီယက်နမ် လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးအသင်းအား ဗီယက်နမ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ‌ရေးရာ ကော်မရှင် အကြီးအကဲ H.E. Mr. Tran Van Tuy ဉီးဆောင်သည့်အဖွဲ့က လာရောက်တွေ့ဆုံသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ | အမျိုးသားလွှတ်တော်
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ မြန်မာ-ဗီယက်နမ် လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးအသင်းအား ဗီယက်နမ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ‌ရေးရာ ကော်မရှင် အကြီးအကဲ H.E. Mr. Tran Van Tuy ဉီးဆောင်သည့်အဖွဲ့က လာရောက်တွေ့ဆုံသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ